FANAMAFISANA TRAIKEFA :: Homena fiofanana ireo mpikirakira boky • AoRaha
FANAMAFISANA TRAIKEFA Homena fiofanana ireo mpikirakira boky
Mitohy hatrany ny fanatsarana ny fahaiza-manao sy ny talenta ho an’ireo mpi­sehatra sy miasa amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina. Ezaka tafiditra ao anatin’ny tetikasa “M’Kolosaina 2.0” tante­rahin’ny ivon-toerana ho an’ny zava-kanto ankehitriny eto Madagasikara na ADMC-Craam, eny Ankatso izany.
Taorian’ireo mpikirakira ny fanamafisam-peo sy jiro dia hiantefa amin’ny mpikira­kira sy mpifanerasera amin’ny boky indray ny fiofanana. Sehatra anisan’ny mila fana­vaozana eto amintsika amin’izao fotoana ny tontolon’ny boky. Betsaka anefa ireo mpisehatra no tsy mahafehy izany, araka ny tokony ho izy. Noho ny faha­tsapana izany dia homena fiofanana ireo mpikirakira boky.
Rahampitso 30 sy 31 oktobra no hanatanterahina ny “Focus” na fihaonan’ireo mpisehatra sy mpiasa amin’ ny tontolon’ny boky eto Mada­gasikara, etsy amin’ny Craam Ankatso. Voakasik’ izany ny mpanoratra, ny mpaneho an-tsary, ny mpitantana trano fanontana boky, ny trano fivarotam-boky, ny mpiandrakitra toerana famakiana boky…Tanjona ny hahamatihanina ny asa sahanin’ireo tsirairay avy. Tombony lehibe ny traikefa ananana noho ny fotoana maharitra nilomanosana ao amin’ilay sehatra asa. Na izany aza, ilaina hatrany ny fanamafisana fahaiza-manao, indrindra noho ny fihazaka­zakin’ny teknôlôjia miantraika be amin’ny tontolon’ny boky.
Mitaky io asa fanatsarana io koa ny adidy iantsorohan’ny mpisehatra tsirairay amin’ny fampiroboroboana ny vaky boky. Ho fanatrarana ny tanjona, ho hita ao ana­tin’ity “Focus” ity ny famelabelaran-kevitra, atrikasa sy fizarana traikefa arahina fanentanana samihafa.